धनुषा सेवा समाज कत्तारको नयाँ कार्यसमिति चयन
धनुषा सेवा समाज कत्तारमा रहेका नेपाली मधेशीहरुलाई समस्या परेका बखत विभिन्न प्रकारका सहयोग गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति : ७ असार, २०७६ | १४:२२:००
न्यूज ब्यूरो, कत्तार । धनुषा सेवा समाज कत्तारको नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । समाजको शुक्रवार सम्पन्न छैठौं वार्षिक अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको हो ।
दोहास्थित ग्राण्ड मलको ह्वाईट हाउस रेस्टुरेन्टमा सम्पन्न अधिवेशनबाट समाजको अध्यक्षमा मो. जामिर नदाफलाई चयन गरिएको छ भने उपाध्यक्षमा चन्द्रवीर यादवलाई चयन गरिएको छ । त्यसैगरी, द्वितीय उपाध्यक्षमा सुभाष साह, महासजिवमा देवेन्द्र ठाकुर, सचिवमा संदिप कुमार मण्डल, कोषाध्यक्षमा कालामुदिन राईन तथा अर्का कोषाध्यक्षमा कालेश्वर मण्डल र सभामुखमा मो. अलि हुसेन राईनलाई चयन गरिएको छ ।
त्यस्तै, समितिको सदस्यमा १४ जनालाई राखिएको छ भने निर्णायक समितिमा ६ जनालाई राखिएको छ । सल्लाहकारमा भने १ जनालाई चयन गरिएको समाजले जनाएको छ ।
यसअघिका समाजका अध्यक्ष सुनिल मण्डल स्वदेश फर्केपछि संस्था कार्यसमिति विहिन थियो । समाजका सम्पूर्ण सदस्य तथा दोहास्थित रहेका विभिन्न मधेशी संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको जनाइएको छ ।